Yonke iThailand ngoku ivulelela abatyeleli ngaphandle kokuvalelwa yedwa yazisa iNkulumbuso
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba Eziphambili zaseThailand » Yonke iThailand ngoku ivulelela abatyeleli ngaphandle kokuvalelwa yedwa yazisa iNkulumbuso
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Iindaba Eziphambili zaseThailand • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Iscreen seTV esibonisa iNkulumbuso yaseThailand izolo ibhengeza ukuvulwa kwelizwe ngaphandle kokuvalelwa ngabakhenkethi.
Kusasazo lukamabonakude kwilizwe lonke, Inkulumbuso yase-Thailand u-Gen. Namhlanje ndifuna ukubhengeza inyathelo elinye elincinci kodwa elibalulekileyo. ”
Urhulumente wayecwangcise ngaphambili ukuvula iBangkok kuphela kunye namaphondo aliqela.
Isibhengezo sanamhlanje siqinisekisile ukuba ilizwe liphela liza kuvulwa kwakhona.
Ukuqala nge-1 kaNovemba, iThailand izakuqala ukwamkela ungeno olungagunyaziswanga ngomoya kwabo bagqibe ugonyo lwabo.
“Kwezi veki zimbini zizayo, sizakuqala ngokuthe chu ukuvumela abantu ukuba bahambe ngaphandle kweemeko ezinzima. I-UK, iSingapore kunye ne-Australia baqala ukukhululeka iimeko zabo zokuhamba phesheya kwabo. Ngolu hlobo lwenkqubela phambili, kusafuneka silumke, kodwa kufuneka siqhubele phambili ngokukhawuleza. Ndiyalele ke iSebe lezeMpilo yoLuntu ukusukela ngomhla woku-1 kweyeNkanga ukubheka phambili, ukuba iThailand izakuqala ukwamkela ukungena eThailand kwabo bangenziwanga lugonyo kwaye bangene eThailand ngenqwelomoya, ”yatsho iNkulumbuso.
Urhulumente wayecwangcise ngaphambili ukuvula iBangkok kuphela kunye namaphondo aliqela. Isibhengezo sangoMvulo sibonakalise ukuba ukuvulwa kwakhona kuya kubandakanya zonke iindawo zelizwe.
"Xa ungena eThailand, bonke abantu kufuneka babonise ukuba bakhululekile kwi-COVID-19, benobungqina beziphumo zovavanyo lwe-RT-PCR, oluvavanywa ngaphambi kokushiya ilizwe lokuzalwa kwaye luya kuvavanyelwa i-COVID-19 kwakhona xa ufika eThailand. Emva koko banokuhamba ngokukhululekileyo kwiindawo ezahlukeneyo njengabantu baseThai abaqhelekileyo.
“Ekuqaleni, sizakwamkela iindwendwe ezivela kumazwe anobungozi. Kwazi uku hamba uye eThailand Amazwe ali-10 azakubandakanya i-UK, iSingapore, iJamani, i-China kunye ne-United States.
"Injongo yethu, iya kuba kukwandisa inani lamazwe ngakumbi nge-1 Disemba 2021, kwaye emva koko, ngoJanuwari 1, 2022," yatsho iNkulumbuso.
Kwiindwendwe ezivela kumazwe ezingekho kuluhlu lwamazwe anobungozi obuncinci, zamkelekile kodwa zinokujongana nezithintelo ezinkulu kubandakanya ukubekwa bodwa.
Inkulumbuso iqhubeke yathi: “Nge-1 kaDisemba ngo-2021, sizakuthathela ingqalelo ukuvumela iziselo ezinxilisayo ukuba ziselwe kwiindawo zokutyela kunye nokuvumela iindawo zolonwabo nezolonwabo ukuba zisebenze ngakumbi ngexesha lombhiyozo woNyaka oMtsha.
“Ndiyazi ukuba esi sigqibo siza nomngcipheko othile. Kuyacaca ngokuqinisekileyo ukuba siza kubona ukunyuka okwethutyana kwiimeko ezinzulu njengoko siziphumza ezi zithintelo.
“Andicingi ukuba izigidi ezininzi ezixhomekeke kweli candelo zinokukwazi ukubanakho ukubethwa kukuphazamiseka kwexesha lesibini leholide elahlekileyo.
"Kodwa ukuba intsholongwane ithi gqi ngokungalindelekanga kwiinyanga ezizayo, iThailand iyakwenza oko."
Icandelo lenza i-20% ye-GDP. Ingeniso yabakhenkethi bamanye amazwe iyodwa yayimalunga ne-15% ye-GDP, enabahambi abaphantse babe zizigidi ezingama-40 abavela phesheya, ngakumbi amaTshayina.
I-Bhanki yase-Thailand iqikelela kuphela i-200,000 yamanye amazwe abafikayo kulo nyaka enyuka ukuya kwi-6 yezigidi kunyaka olandelayo.